Foto nke motherboard nke ọhụrụ iPhone 7 kụrụ ụgbụ | Akụkọ akụrụngwa
Foto nke motherboard nke ọhụrụ iPhone 7 kụrụ ụgbụ
Anyị dị nso ịmara ọkwa ọhụrụ nke Apple, iPhone ọhụrụ na iPhone 7 Plus, mana maka ugbu a ihe anyị nwere na mpụga nke iPhone ọhụrụ ahụ maara anyị nke ọma ebe ọ bụ na obere ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ka ọ gbanwee site na ụdị dị ugbu a na ụdị Plus na ya nwere ike igwefoto azụ abụọ). Kama ọ bụrụ na anyị anya obere gabiga n'èzí nke ngwaọrụ na anyị delve n'ime esịtidem ngwaike nke ọhụrụ iPhone, ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịhụ na mgbanwe ndị ahụ pụtara ìhè karịa.Eziokwu bụ na anyị niile doro anya na iPhone ọhụrụ ga-anọchite anya mgbanwe dị mkpa gbasara ike na arụmọrụ, mana ihe enweghị ike ikwu bụ na motherboard dị iche n'etiti iPhone ọhụrụ na ndị dị ugbu a. O doro anya na osisi a na-efu ihe ndị ọzọ dị n'akụkụ ọzọ dị ezigbo mkpa, mana na nkenke ma hụ na vidiyo ntụnyere enwere mgbanwe ole na ole. Anyị nwere video ebe ha na-egosi anyị ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti ma motherboards, nke iPhone 6s dị ugbu a megide ndị nke ekwuru iPhone 7:
Na nkenke, ọ bụ akụkụ dị oke mkpa na otu ọ bụla mana ị gaghị etinye aka gị n'isi ma ọ bụrụ na ọdịiche dị n'etiti nke a na nke ugbu a adịghị oke. Na mgbakwunye, ndị a bụ ntapu nke “teradown” ekwenyeghi ka ndị ọrụ iFixit na-ejikarị ngwaọrụ arụ ọrụ ozugbo ha malitere ya, yabụ ka anyị nụ asịrị a n’echeghị echiche ọzọ. Onye nhazi M10 ga - enye iPhone ọhụrụ a na iPhone 7 Plus ka o nwekwuo ikike na arụmọrụ karịa iPhone dị ugbu a, ihe dị ezigbo mma maka onye ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Foto nke motherboard nke ọhụrụ iPhone 7 kụrụ ụgbụ